अनुहार नचाएर सबैको दिलमा बसेकी गीता ओली ! सबैले मायाले काली भन्छन् (भिडियो सहित) – Butwal 24 News
September 29, 2021 Butwal 24 NewsLeaveaComment on अनुहार नचाएर सबैको दिलमा बसेकी गीता ओली ! सबैले मायाले काली भन्छन् (भिडियो सहित)
पछिल्लो समय मा सामाजिक संजाल मा टिकटक धेरै को साथि बनेको छ। टिकटक बाट मानिसले आफ्नो सुख दुख साथ्ने एक ठाउ पनि बनेको छ। टिकटक बच्चा देखि बृद्ध सम्म सबैले चलाउने गरेका छन्। टिकटकबाटै मानिसहरुले धेरै नै कमाएको पनि पाइन्छ। आफु संग लुकेर रहेको प्रतिभालाई मानिसले टिकटक बाटै सार्बजनिक गरेका छन्। टिकटक बाटै धेरै व्यक्तिहरु कलाकार समेत बनेको पाईन्छ।
त्यस्तै, टिकटक चलाउने मध्ये एक हुन् गीता ओली। कैलाली घर भएकी गीता अहिले सबैको मन मुटुमा बस्न सफल भएकी छिन्। घरमा ४ जनाको परिवार मध्य एक मात्र छोरी हुन् गीता ओली। गीता पढेको शिलशिला मा अहिले काठमाडौँ मा बस्ने गर्छिन। गीताले आफ्नो प्रतिभा लाई टिकटक मार्फत सबैलाई देखाउने गर्छिन। काली काली दिल वाली भने जस्तै गीता सबैको मनमुटुमा बस्न सफल भएकी छिन। मान्छे जेर्दा जतिनै राम्री छिन उत्तिनै राम्रो उनको प्रतिभा रहेको छ।
जुनसुकै गीतमा पनि गीताले आफ्नो अनुहारको हाउभाउले प्रस्तुत गर्ने गर्छिन। उनको कला लाई कमेन्ट मार्फत सल्लाहसुझाब दिदा उनि धेरै नै खुशी हुन्छिन। उनको भिडियो लाई टिकटक मा धेरै नै रुचाइएको हुन्छ। छोटो समयमै गीता सबैको प्यारी बनेकी छिन। उनले जति भिडियो बनाएर टिकटक मा राख्छिन त्यति धेरै नै उनको भिडियो हरु चल्ने भएको हनाले अझै भिडियो बनाउन उत्साह जाग्छ उनलाई।
गीता सानै हुदा देखि नै उनको बुबा आमा ब्यन्ग्लोर हुनुहुदो रहेछ। ममा घर बसेर पढेकी गीता अहिले भाई संगै फुपू संगै काठमान्डू बस्ने गर्छिन। गीता भन्छिन यति राम्री छोरी जन्माउने आमा बुबालाई पनि देख्न पाए हुने भन्नु हुन्छ तर मैले नेपाल आएपछि देखाउने नै छु भनेकी छिन। यस भिडियो बाट पनि गीताले आफ्नो बुबा आमालाई धेरै धेरै सम्झेर अब हाम्रो भेट छिट्टै नै हुन्छ पनि भनेकी छिन। बुबा आमाले मलाई यस क्षेत्रबाट कहिले पनि रोक्नु भएन , सधै मेरो राम्रो सोच्नु भएको छ मैले पनि बुबा आमाको सपना पुरा गर्ने छु पुरा जानकारीको लागि भिडियो हेरेर थाहा पाउनुहोस।